Raha ny salanisa omaly dia tafakatra 19 ireo tranga voamarina ho Coronavirus eto amin'ny Nosintsika hoy ihany ny filoha ary efa natoka-monina tanteraka izy ireo. Tombony ho antsika manokana ny fahalalana avy hatrany ireo olona ahiahiana ho mety mitondra ilay tsimok'aretina ary efa arahi-maso izy ireo. Misy ny fiara 70 isa izay mivezivezy manao ny fanarahi-maso ireo olona ireo hoy ny filoha. Afaka andro vitsy dia hahazo fitaovana fitiliana avy amin'ny firenena sinoa sy ny firenena mikambana isika, hahafahana mitily ao anatin'ny 20minitra ireo olona ahiahiana. Tsy maintsy maka ny fepetra rehetra ihany koa isika hisorohana ny fiparitahan'ity aretina Covid-19 ity, mba tsy hahatongavantsika any amin'ny "stade 2" izay mandrara tanteraka ny fifamoivoizana manerana ny Nosy raha sanatria tanteraka. Misy noho izany ny paika sy tatitra hahafahana misoroka izany izay miainga amin'ny fifehezan-tenan'ny tsirairay ao anatin'ny 15 andro efa napetraka. Ho an'ireo marary efa arahi-maso kosa dia homena tohana ara-tsakafo manamafy hery fiarovana vita malagasy izy ireo, ary omena sakafo be otrikaina ihany koa izay efa nolanjalanjaina tsara sy misy eto amintsika avokoa manomboka anio. Mila matanja-tsaina sy vonona hiatrika isika hoy ny filoha Rajoelina omaly, hahafahantsika mandresy ny valan'aretina Coronavirus. Araka ny nambarany moa, dia hanao tatitra amin'ny vahoaka isan'andro ny filoha Rajoelina, mikasika ny fivoaran'ny aretina Coronavirus eto Madagasikara. Ando